SomaliNet Magazine: CAYAARAHA - QUBANE (SOOMAALIYA IYO ADUUNKA)
Maxamed Cali Kalaay yuu u dhashay?
Feeryahankii caanka ahaa ee dunida Maxamed Cali Kalaay ayaa loo malaynayaa in Irish ay wax u galeen. Cilmi-baarayaal ka shaqeeya xarunta Clare Heritage ee koonfurta galbeed ee dalka Ireland ayaa sheegay inay hayaan markhaati cad oo ah in feeryahanka ugu caansan dunida ee u dhashay Maraykanka Maxamed Cali kalaay in uu asal ahaan ka soo jeedo Irish. Dadka baarista sameeyay waxey qabaan In Maxamed Cali awoowgiisa labaad- Abe Grady, uu Maraykanka qaxooti ku tagay kana yimid degmada Clara sannadihii 1860 aadkii soona degay Gobolka Kentucky oo uu ku guursaday gabar madow ah. Wiilkii uu dhalayna uu guursaday gabar madow ah oo markaas labadiisii gabdhood middood-Odessa Grady,ay guursatay Cassius Clay 1930 aadkii oo ay dageen Lousiville, Kentucky oo markaas wiilkoodii oo la oran jiray Cassius uu ku dhashay 1942dii.
Markii uu Cassius ku guulaystay Koobkii feerka ee dunida oo uu kaga adkaaday Sonny Luston sannadkii 1964 tii ayuu soo islaamay oo magaciisiina iska baddalay isaga oo la baxay Maxamed Cali. Baaritaankan waxaa sameeyay Telefisiyoonka dalka Ireland oo u dabbaal-dagayay sannadguuradii 30 aad ee ka soo wareegtay markii uu Maxamed Cali tagay dalka Ireland sannadkii 1972- dii oo uu la ciyaaray feeryahankii caanka ahaa ee la oran jiray Al Blue Lewis. Nimankii baaritaanka sameeyay waxey yiraahdeen warqad dhalasho lama hayo oo caddeynaysa in Abe Grady ,Cali Awoowgiisa labaad, uu ku dhashay tuulada la yirahdo Ennis. Laakiin waxaan shaki ku jirin in John Grady , Cali awoowgiisa saddexaad uu guri ku lahaa Ennin sannadkii 1855- kii, mana jirin bey yirahdeen qof kale oo la yiraahdo John Grady oo waqtigaasi tuulada dagganaa. Sidoo kalena wax shaki ah kuma jiro in Abe Grady uu ahaa Cali Awoowgiisa labaad ayay yiraahdeen dadkii baaritaanka sameeyay.
Toddobaadka soomaalida iyo Kooxda Timberwolves (NBA)?
Sida aynu horay ula socodsiinay dhallinyarada Soomaaliyeed ee Jecel ciyaarta kubbadda koleyga waxaa garoonka Target center ka dhici doona 31ka Bisha Maarso 2002 da , Saacadduna tahay 10:00AM ilaa 12:30 P.M barnaamij isboorti oo ay ka qayb-qaadanayaan dhallinyarada Soomaaliyeed ,iyada oo halkaasina uu ka jiri doono aqoon isweydaarsiyo ay bixinayaan qaar ka tirsan kooxda Timber-wolves.
Haddii aad xiisaynayso inaad barnaamijkaasi wax ka ogaato waxaad ka heli kartaa caddadkii Somalinet Magazine ku soo baxay joornaalka Febraayo 1-eedii 2002-da
Tartankii Kubbadda Cagta Qarammada Qaaradda Afrika
Tartankii Ciyaarha kubbadda cagta ee qarammada qaaradda Afrika ayaa si xiiso leh loogu soo gabagabeeyay febraayo 10 keedii 2002da Magaalo madaxda dalka Mali ee Bamako waxaana sannadkani ka soo qayb-galay 16 kooxood. ciyaarihii isreeb-reebka (semi-final) waxaa isugu soo haray kooxaha: Nayjeeriya, Senigal, Mali iyo Cameroun. kooxda Cameruun ayaa iyadu 3 iyo 0 ugu awood sheegatay kooxdii martida loo ahaa ee Mali, Sidoo kalena Senegal ayaa 2 iyo 1 ku reebtay kooxdii loogu hanweynaa horyaalnimada sannadkan ee Nayjeeriya.
kooxda Nayjeeriya waxay gashay kaalinta 3aad, waxaana la guddoonsiiyay billaddii maarta ahayd, arrintan iyada ah oo u cuntami wayday reer Nayjeeriya iyo tababarahoodii waxay dhalisay buuq faro badan taasoo gunaanadku noqday in tababarihii kooxda Amodu Shaibu shaqada laga fariisiyo lana magacaabo tababare kale oo la yiraahdo Festus Onigbinde. Ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaa isku haleelay kooxaha Cameroun iyo Senegaal oo iyagu ka mid ah sannadkan shanta kooxood ee magaca Afrika uga qayb-galaya tartanka ciyaaraha adduunka ee ka dhacaya dalalka kuuriyada koonfureed iyo Japan.
Horyaalka Kubbadda cagta Ee qaaradda Afrika 2002
( C A M E R O O N ) Labadan kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar farsamadeedu sarreysay oo aad loo jeclaystay, hase yeeshee daqiiqadihii loogu talo-galay iyo waqtigii dheeriga ahaa intuba ma suuro galin inay labada kooxoodba goolal kala dhaliyaan. Waxaa lagu kala saaray Rigoorayaal (free Kicks) taasoo natiijadu noqotay 3 iyo 2 ay guushu ku raacday Kooxda qaranka kubbadda cagta ee Indomitable lions ee dalka Cameroun iyada oo mar kale difaacatay koobkii koobabka qarammada ee horyaalnimada qaaradda Afrika oo ay horay u haysatay. Tartankan isaga ah oo 2 dii sanoba mar la qabto waxaa sannadka 2004 lagu qaban doonaa Dalka Tunisia.?
Leonix Lewis Iyo Tyson Maxaa kala Haysta
Feeryahanka Caanka ah ee dunida Mike Tyson ayaa xiriirka feerka ee gobolka Nevada u diideen warqaddiisii shatiga ee feerka iyaga oo ka mamnuucay inuu ku ciyaaro gobolkaasi . Tyson ayaa lagu eedeeyay inuu dagaal gacan ka hadal ah gaystay xilli la qabanqaabinayay ciyaar feer ah oo lagu wadey inay dhex marto April 6 deeda 2002-da horyaalka feerka dunida ee miisaanka culus Leonix Lewis iyo Mike Tyson.?
Buuqaasi oo dhacay intuu socday shirkii jaraa\_'id ay qabanayeen labadaasi ciyaaryahan ayaa wuxuu dhaliyay in dib loo dhigo ciyaartaasi iyadoo aan wali la isku raacin goobtii lagu qaban lahaa. Dad badan oo u ololeeya ciyaartan feerka ayaa aad u xiisaynaya inay labadan ciyaartooy is arkaan, waxaana si aad ah looga baaraan-dagayaa goobtii lagu qaban lahaa feerkan isaga ah iyada oo durbadiiba la tilmaamay goobo lagu qaban karo feerkaasi sida:Los Angeles, Manila iyo South Afrika. Sidoo kalena waxaa aad u daneynaya in feerkaasi lagu qabto gobollada kale ee Maraykanka Sida Texas iyo Georgia. Sidoo kalena dalalka Denmark iyo Ingiriiska ayaa aad u quud darreynaya in feerkaasi ay martigaliyaan. Warar aan ilaa hadda la xaqiijin ayaa sheegaya in feerkaasi loo malaynayo in la qaban doono June 6 deeda 2002 da.
Faarax W. Caddow
Kooxaha Kubbadda Cagta ee Soomaaliya
Kooxdii qaranka kubbadda cagta ee Soomaaliya oo iyadu ka qayb-gashay tartamadii ciyaaraha ee bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay Ruwanda ayaa qado sharaf loogu sameeyay hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho. Qado sharaftaasi oo ay ka qayb-galeen Madax sare oo ka tirsan dawladda ku meel-gaarka iyo guddiga Olimbikada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka hadlay rag badan oo ay ka mid ahaayeen Xoghayaha guud ee xiriirka kubbadda cagta Soomaaliyeed Maxamed Yusuf Kobey, Ku simaha guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Muxidiin Xasan Darbaweyne, iyo ku simaha guddoomiyaha guddiga Olimbikada Soomaaliyeed Cabdulqaadir Ibraahim Gacal (Abkow). Mas\_'uuliyiintaasi waxaa ay giddigoodba si aad ah uga warbixiyeen taariikhdii isboortiga Soomaaliyeed iyo horumarka uu ku tallaabsaday iyo sida loogu baahan yahay in horay loogu mariyo noocyada ciyaareed ee kala duwan looguna baahiyo dhammaanba gobollada dalka. Wasiirka Isboortiga ee Dawladda ku meel gaarka ah mudane Qariidi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad u ammaanay dhallinyaradii ciyaartooyda ee tartankaasi ka qayb-gashay, inkasta oo aysan keenin wax guul ah haddana waxey muujiyeen karti iyo dadaal dheeraad ah. Gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay Raiisul wasaaraha dawladda ku meel gaaarka ah Xasan Abshir Faarax oo isagu sheegay inaanan ciyaaryahanka xulka qaranka ka mid ahi laba waxyaabood loogu dulqaadan Karin hadduu ku sifoobo: qaad cunid iyo sigaar cabbid, oo ah kuwa hoos u dhiga awoodda ciyaartoyga,mana masili karo magaca qaranka soomaaliyeed ciyaaryahanka noocaasi ah. Ugu dambayntiina Raiisul wasaaruhu wuxuu ballanqaaday inuu qayb wayn ka qaadan doono horumarinta Isboortiga Soomaaliyeed.?
Dadka Xog-ogaalka u ah Isboortiga?Soomaaliyeed waxey isku raacsan yihiin In Xasan Abshir uu kaalin mug leh ka soo?Xasan Abshir Faarax?qaatay dhisiddii isboortiga Soomaaliyeed uuna yahay shakhsi aad u jecel isboortiga,
waxaana lagu tiriyaa Mas\_'uuliyiintii fara ku tiriska ahayd ee soo martay dalka Soomaaliya oo gacan wayn ka gaystay horumarinta isboortiga. Sidoo kale Faarax weheliye Caddow (Sindiko) oo ah Guddoomiyaha guddiga Olimbikada Soomaaliyeed ahna Guddoomiyaha guddiga Isboortiga ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika (Cecafa) iyo Guddoomiye ku xigeenka Isboortiga (CAAF) iyo xubin guddiga isboortiga Adduunka (FIFA) ayaa isaguna ah tusaale wanaagsan gacanta weyn ee uu ka gaysto mar kastaba horumarinta isboortiga Soomaaliyeed . In kasta oo aad loogu ammaanay waxqabadkoodii Isboortiga ayaa haddana bulshada Soomaaliyeed ee isboortiga jecel ay indhaha ku eegaysaa labadaasi mas\_'uul inay dardar hor leh galiyaan kaalinta kaga aadan horumarinta Isboortiga Soomaaliyeed.?
Sidoo kale kooxda FC Elman oo iyadu haysata horyaalka kubbadda cagta ee Soomaaliya ayaa iyaguna ka qayb-galaya tartanka kooxaha horyaalada ee bariga iyo bartamaha Afrika oo ka dhacaya Jaziiradda Zanzibar. Kooxda FC Elman ayaa lagu tiriyaa inay tahay kooxihii ugu adkaa ee ka aasaasmay dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye, waxaana u ciyaara dhallinyaro aad ugu wanaagsan kubbadda cagta oo mustaqbal wanaagsan leh. Kulammadii ay ciyaareen ayey durbadiiba soo bandhigeen qaab ciyaareed wanaagsan oo aad loo jeclaystay oo u horseeday inay guulo ku tallaabsadaan. Kooxihii ay la ciyaareen iyo natiijadooda:
FC Elman (Somalia) 0 Simba (Tanzania) 0?
FC Elman (Somalia) 1 Forodha (Zanzibar) 0
FC Elman (Somalia) 0 Nizabij (Ruwanda 2
Kooxda Fc Elman (Somalia) oo iyadu marna bar-bardhac gashay, marna badisay, marna laga badiyay sida ka muuqata shaxda sare ayaa shan dhibcood hoggaanka ku haysa?
Ciyaaraha Xiddigaha (All Stars-NBA)
Sannad kasta dalkan Maraykanka waxaa lagu qabtaa ciyaaro aad u xiiso badan oo lagu magacaabo xiddigaha (NBA All Stars), iyada oo ciyaartooyda xulka ahi ay u ciyaaraan gobollada ay kala deggan yihiin East iyo West. Dadweynaha Maraykanka ee ciyaaraha jecel gaar ahaan kubbadda koleyga ayaa iyagu si toos ah u soo doorta ciyaartooyda ay jecel yihiin. Sannadkan oo isagu aad uga duwanaa sannadihii hore ayaa dabbaaldegga ciyaaraha xiddigaha waxey socdeen laba maalmood oo kala ahaa 9 iyo 10 ka febraayo 2002da, waxaana ka qayb-galay ciyaartooydii cuslaatay ee NBAda, ciyaartoyda haatan, kuwa mustaqbalka, iyo fannaaniinta oo yaryar iyo waaweyn isugu jiray, waxaana lagu soo kordhiyay waxyaabo badan oo xiiso gaar ah u sameynyay bilicda ciyaarahaasi, sidoo kalena waxaa jawiga aad wax uga baddalayay ciyaaryahan Michael Jordan oo isagu dib ugu soo noqday fagaarayaasha kubbadda koleyga kana qayb-qaadanayay barnaamijkaasi xiddigaha.. Barnaamijkaasi isboorti oo aad u xiiso badnaa waxaa lagu qabtay garoonka kubbadda koleyga ee la magac baxay \_" First Union Center\_" ee ku yaal Philadelphia. Marka aan soo koobo guud ahaanba ciyaarihii la qabtay iyo tartamadii la socdayba sidan ayey noqotay natiijadoodu:
Kooxaha loo bixiyay Rookie iyo Sophmore ayaa isku haleelay ciyaar aad loo jeclaystay oo ay guushii ku raacday 103 dhibcood kooxda Rookie, halka kooxda Sophmore ay ka keensadeen 97 dhibcood. \_"Rookie waxaa loogu yeeraa ciyaartooyda sannadkaasi la soo qaatay oo NBA da ku soo biiraysa, Sophmore iyaguna waxaa loogu yeeraa sannad ka hor ciyaartooyda NBAda ku soo biirtay\_".?
Ciyaaryahan Jason Richardson oo ka socday Golden state (Warriors) ayaa ku guulaystay ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa Rookie (MVP) isaga oo dhaliyay 26 dhibcood.Sidoo kalena wuxuu ku guulaystay tartanka la galinta ( Dunking).
Ciyaaraha koortiga nuskiisa lagu ciyaaro ee saddexda ciyaartooy waxaa ku tartamayay afar kooxood oo kala ahaa: Houston, Philadelphia, La. Lakers, iyo Sacramento oo iyadu koobka ku guulaysatay.
Tartanka tuurashada dheer ee saddexda dhibcood waxaa ku tartamayey 8 ciyaartooy?
Waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay ciyaaryahan Peja stojakovic oo ka socday Sacramento, kalinta 2 aadna Richard Person oo ka ka socday LA.Clippers, kaalinta 3aadna Steve Nash oo ka socday Dallas Mavericks. Tartanka la galinta kubbadda (Dunking) isaguna waxaa ku tartmayey sannadkan 4 ciyaaryahan oo kaliya, waxaana ku guulaystay kaalinta 1aad Jason Richardson oo isagu urursaday 85 dhibcood, kaalinta 2aadna Gerald wallace oo urursaday 80 dhibcood. Ugu dambeyntii xafladahaasi waxaa lagu soo xiray ciyaartii ay dadku sugayeen oo dhex martay ciyaartooydii xulka ee East iyo West, waxaana 135 dhibcood ku guulaystay kooxdii West, halka kooxdii East ay ka keensadeen 120 dhibcood.?
Gaba-gabadii ciyaarta waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay koobkii ciyaar wanaagga ee xiddigaha xiddigooda ciyaaryahan Kobe Brayant (LA.Lakers) oo u safnaa kooxda West isaga oo dhaliyay habeenkaasi 31 dhibcood.
Ciyaarihii Qaboobaha (Winter Olympic Games)
Muddadii u dhaxaysay 8 ilaa 24kii febraayo 2002da waxaa si xiiso badan uga socday magaalada Salt lake city ee gobolka Utah tartamadii ciyaaraha Olimbikada ee loo yaqaan (Winter Olympic Games). Tartamadan Ciyaareed intooda badan waxaa ka qayb-gala dalalka qaboobaha leh ee barafku ka dhaco, waxaase sannadkan ka dhex muuqday kooxo ka socday Masaarida iyo Iiraan. Iyada oo ay jireen noocyo ciyaareed oo faro badan ayaa ciyaarta ay dadku sida aadka ah u xiisaynayeen ay?ahayd ciyaarta loo yaqaano \_"Skating\_" oo ay ciyaaraan gabdho caan ku ah ciyaartan
Bidix: Irina Slutskaya (Russia), Dhexda Sarah Hughes (USA) iyo Michelle?Kwan( USA)
aadna looga qadariyo dunida sida: Irina Slutskaya oo u dhalatay Ruushka kuna guulaysatay kaalinta 1aad ciyaarihii Olimbikada adduunka ee lagu qabtay Australia iyo Michelle Kwan oo Maraykan ah kuna guulaysatay shan jeer Olimbikada adduunka . Hase yeeshee waxaa noqotay arrin lama filaan ah in gabadha la yiraahdo Sarah Hughes oo ka socotay Maraykanka ay noqotay horyaalka dunida ee ciyaarta Skating ka dib markii ay u Xukmiyeen kaalinta 1aad garsoorayaashii ciyaartaasi dhxdhexaadinayay .Arrintan iyada ah ayaa waxey dhalisay in cabasho xoog lihi ay ka timaado Madaxda sare ee Russia Sida Madaxweyne Vladamir Putin iyo barlamaanka dalka Russia oo iyagu qaba inaan si caddaalad ah loo xukmin ciyaartyaasi, hase yeeshee maamulka ciyaaraha Olimbikada wuxuu ku adkeystay in ciyaartaasi loo xukmiyay si caddaalad ah. Ma aha dalka Russia oo kaliya dawladaha cabashada muujiyay oo waxaa la qaba isna Dalka Kuuriyada Koonfureed oo isna cabasho ka muujiyay ka dib markii ciyaartooygoodii qaaliga ahaa ee 1500 mitir Don Kim oo ciyaara ciyaarta skating kuna guulaystay kaalinta 1aad laga tirtiray dhibcihiisii.